रेबिजबारे बुझ्नैपर्ने कुरा, के भ्रम, के सत्य ?
January 31, 2018 Internet Khabar
हामीकहाँ जताजतै छ्यापछ्याप्ती सडक कुकुर छन् । जतिसुकै सर्तकता अपनाए पनि कुकुरले कुनैपनि बेला टोक्न सक्छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र बर्षेनी दुई दर्जनको बढी व्यक्ति जनावरको टोकाईले गर्दा रेबिज लागेर मर्ने गर्दछन् । देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने, यो आंकडा निकै कहालिलाग्दो हुनसक्छ । रेबिजको कारण बर्षेनी सैयौंको ज्यान जाने अनुमान गरिएको छ ।
रेबिज लागेपछि मानिसको मृत्यु हुने लगभग निश्चित छ । त्यसैले जनावरले टोकेमा घाइते मानिसहरु रेबिज रोग बारे परामर्श लिन दैनिक जस्तो यस अस्पतालमा आउने गरेका छन् । तर, काठमाडौँ उपत्यका भित्रकै दुर्गम ठाउँहरु र काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरुमा जनावरले टोकेमा के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिन्छ ।
गाउँघर तिर अहिलेपनि रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउन आनाकानी गर्ने, बेवास्ता वा ध्यान नदिदा रेबिज लागेर मर्नेहरुको संख्या बर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको अनुभब हामीसँग छ । यी निम्न कुराहरु जनावरको टोकाई पछि बढी सोधिने भ्रम तथा यथार्तताहरु हुन् ।
(लेखक शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन्छ)
यो तस्वीरमा भएका गडबडी थाहा पाउनुहुन्छ ?
‘भोक नलागी भोकै छु भन्नेलाई खासै महत्व दिइन्नः प्रधानमन्त्री ओली’ (अन्तवार्ता)